Culeys weyn oo ka dhashay tallaabada lagu xiray Isgoyska Dabka (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Culeys weyn oo ka dhashay tallaabada lagu xiray Isgoyska Dabka (SAWIRRO)
Culeys weyn oo ka dhashay tallaabada lagu xiray Isgoyska Dabka (SAWIRRO)
Laamaha amniga ee Magaalada Muqdisho ayaa xalay dhegxaan waaweyn ku gooyay Isgoyska Dabka, oo ku yaala wadada mashquulka badan ee Maka Al Mukarama.
Nin la socday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa shalay xoog kaga gudbay boolis ku sugnaa Isgoyska Dabka, iyadoona uu daqiiqado ka dib bartilmaameedsaday bar kontorool oo boolisku ku leeyahay Isgoyska Sayidka, oo ah kontoroolka hore ee laga ilaaliyo ammaanka Aqalka Villa Somalia.
Xirnaanshaha wadada ayaa waxaa durbaba laga dareemay isu socodka wadooyinka ku yaala bartamaha Caasimadda Muqdisho.
Muuqaalo laga soo qaaday nawaaxiga Isgoyska Dabka ayaa muujinaya saxmad iyo ciririiri ka dhashay amarka lagu xiray isgoyskaasi.
Maxamed Cabdi oo ka mid ah wadeyaasha mooto bajaajta ayaa sheegay in xirnaanshaha wadada ay culeys weyn ku keentay gaadiidleyda.
Afhayeenka Xukuumadda, Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa mar sii horeysay qiray in magaalada laga dareemay culeys uu abuuray xirnaanshaha wadada.
“Go’aanka Isgoyska Dabka qayb ahaan lagu xiray wuxuu abuuray culeys dhanka dhaqdhaqaaqa Shacabka. Inshallah dib u eegis deg deg ah ayaa lagu sameynayaa iyada oo had iyo jeer ahmiyadda la siinayo daryeelka shacabka ,lana sii xoojinayo adkeynta amniga.” Ayuu yiri Macalimuu.
Ma cadda cidda bixisay amarka lagu dhegxaanta lagu soo dhigay Isgoyska Dabka, hase ahaatee Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo.
“Waxaan faray hay’adaha amniga in ay deg deg u furaan waddada Dabka oo halbowle u ah isu socodka shacabka iyo ganacsiga caasimadda.. Shacabka Muqdisho waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkooda, waxaanna ka codsanayaa in ay laamaha amniga ku gacansiiyaan sugidda nabadgelyada.” Ayuu yiri Rooble oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Previous articleRW Rooble oo magacaabay Guddi Farsamo oo u gogol xaara shirka wadatashiga
Next articleArgagax ka dhashay dilka saddex dumar ahi loogu gaystay Muqdisho